Monday June 01, 2020 - 10:25:09 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Caabuqa safmareenka ah ee Carona Virus ayaa wali gummaad ka geysanaya caalamka gaar ahaan wadamada dhaca qaaradaha Yurub iyo Mareykanka oo ah meelaha ugu dhimashada iyo bukaanada badan.
Wadanka Baraaziil ayaa noqday dalka afaraad ugu dhimashada badan Carona Virus kadib markii saacadihii lasoo dhaafay lasoo calaamadeeyay kumanaan dhimasho iyo bukaanno ah, waxaa kale oo sare usii kacaya dadka ko bogsoonaya cudurka covid19 oo dhowaan lib bilood jirsan doona.
Wararka ka imaanaya wadanka Baraaziil ayaa sheegaya in dad gaaraya 956 qof ayaa saacadihii lasoo dhaafay oo kaliya udhinteen carona Virus halka uu soo ritay dad gaaraya 26,926 ruux sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka.
Tirakoob guud oo dowladda baraaziil kasoo baxay ayaa lagu caddeeyay in wadarta guud ee dadka carona udhintay ay gaarayaan 29, 341 qof tani waxay ka dhigantahay in baraaziil uu dhimashada uga sare maray faransiiska oo carona uu ka dilay 28,771 ruux.
Baraaziil waa wadanka Afaraad ee dadkiisu ladhibanyihiin caabuqa Covid19 waxaana ka horreeya Mareykanka,Ingiriiska iyo talyaaniga, warbixinadii ugu dambeeyay waxay tibaaxayaan in dad gaaraya 465,166 qof Baraaziiliyaan ah ay cudurka lajifaan.
Dowladda oo khafiifisay tallaabooyinkii xayiraadda ayaa loo sababaynayaa in cudurka Carona uu wadanka kusii laba kacleeyo, horraanti bishan ayay warbaahinta wadankaas ayaa faafisay muuqaalka madaxweynaha Baraaziil oo si aan kala sooc laheyn ugacan qaadaya boqolaal qof isagoo dhiiri gelinayay in dadku isdhaxgalaan ayna iska indha tiraan halista Caabuqa Covid19.